အဆိုတော် အစ္စဏီနှင့် မော်ဒယ်တို့နှစ်ဦး စလုံးတွင် သုက်ရည် မတွေ့ရှိဟုဆို - Yangon Media Group
အဆိုတော် အစ္စဏီနှင့် မော်ဒယ်တို့နှစ်ဦး စလုံးတွင် သုက်ရည် မတွေ့ရှိဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၅
အဆိုတော် အစ္စဏီနှင့် မော်ဒယ်တို့နှစ်ဦးစလုံးတွင် သုက်ရည်မတွေ့ရှိဟု မှုခင်း ဆရာဝန်ကထွက်ဆိုကြောင်း စွပ်စွဲခံ၏ရှေ့နေကပြောသည်။ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် တာမွေမြို့ နယ်တရားရုံး၌ အမှုမှ တရားလိုပြသက်သေ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီးမှ မှုခင်းဆရာဝန် ဒေါက်တာမင်းသူနှင့် တရားလို မော်ဒယ်စူးရှထက် (ခ)ဇာခြည်ဌေးတို့ကို စစ် ဆေးခဲ့သည်။
စွပ်စွဲခံ အစ္စဏီဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ကျော်ဇင်ဦးက ”ဆေးဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ သုက်ပိုး၊ သုက်ရည် တွေ့ရှိခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်အလက်ကို ပေါ်လွင် အောင်စစ်ဆေးသွားပါတယ်။ မုဒိမ်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ သုက်ပိုး၊ သုက်ရည် အဓိကတွေ့ရှိရမယ်။ အခုသုက်ပိုး၊ သုက်ရည်ဆိုတာ ကျင့်တဲ့သူ ရော၊ အကျင့်ခံရသူနှစ်ယောက်စလုံးမှာ မရှိပါဘူးဆိုတော့”ဟု မီဒီယာများကိုပြောသည်။
ရုံးချိန်းတွင် Cele7မှ ဧပြီ ၁၃ ရက်ကရိုက်ကူးထားသည့် အင်တာဗျူးအခွေကို စွပ်စွဲခံဘက်မှ ရုံး တော်တင်ခဲ့ရာ တရားလိုဘက်က ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး သက်သေခံအဖြစ် လက်ခံသင့်၊ မသင့်ကို လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် အမိန့်ချသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ တရားလို မော်ဒယ်စူးရှထက်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပြောသည်။ မော်ဒယ် စူးရှထက်ကို ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် ဇူလိုင် ၂ ရက် (တနင်္လာနေ့)သို့ ချိန်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုတော်အစ္စဏီကို ၄င်း၏ချစ်သူ မော်ဒယ်စူးရှထက်အား နာကျင်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အဓမ္မနှစ်ကြိမ် ပြုကျင့်သည်ဟုဆိုကာ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆၊ ၃၂၃၊ ၃၂၄ ဖြင့် တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးတွင် မေ ၁ဝ ရက်က တရားစွဲတင်ထားသည်။
မိုးသည်းထန်ပြီး လေပြင်းတိုက်မှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်ရှိေ??
ဂျွန်စတုန်းပုံ တက်တူးထိုးမည့် ပရိသတ်အတွက် ဝေါ်လ်ကာ အကုန်အကျခံမည်
နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ သင်တန်းကျောင်းများအတွက် နည်းပြရာထ??
ကလေးမြို့တွင် စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်နေသည့် အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်တင်ယာဉ်များကို စစ်ဆေးရာ ရက်သတ္တ??
မက်ဆီ ၊ စီရော်နယ်ဒို ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကကို နေမာနဲ့ အမ်ဘာပီ ဦးဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ြေ??
ဆားချော ထုတ်သည့် လုပ်ငန်း မကွေးမြို့၌ အဆင်ပြေ